Aabe qirtay in Gabadhiisa dil sharafeed u geestay iyo cadho xoogan oo ka dhalatay | Dhexnimo Media
Home Wararka Aabe qirtay in Gabadhiisa dil sharafeed u geestay iyo cadho xoogan oo...
Aabe qirtay in Gabadhiisa dil sharafeed u geestay iyo cadho xoogan oo ka dhalatay
Aabe qirtay in Gabadhiisa dil sharafeed u geestay iyo caro xoogan oo ka dhalatay
Dalka Iran waxaa ka dhacay dil dad badan ka cadhoodeen kana falceliyeen, kadib markii Aabe gabadhiisa u geestay dil uu ku tilmaamay mid sharafeed uu uga soo horjeeday go’aan gabadhiisa ay ku raacday nin ay jecleyd.
Warbaahinta dalka Iran ayaa tabisay in Romina Ashrafi oo 14-sano jir aheyd ay la baxsatay nin ee jeclaatay oo 34-sano jir ahaa, kadib markii waalidkeed ay ka diideen in ninkaasi u guuriyaan.
Ciidamada booliiska Iran ayaa la sheegay in soo qabtee gabadha iyo ninka ay la baxsatay, booliiska ayaana dib ugu celiyay gabdhan gurigooda, waxaana la sheegay in gabadha booliiska u sheegtay in ay halis kala kulmeyso gurigooda hadii lagu celiyo.
Aabaha dhalay gabadhan ninka la baxsatay ayaa markii uu guriga ugu tagay gabdhiisa dil u geestay, waxa uuna aabahan oo qirtay dilkaasi ku tilmaamay mid sharafeed uu ku ilaalinayay sumcada qoyskiiska intiisa kale.
Ciidamada booliiska ayaana xabsiga dhigay aabahan dilka u geestay gabadhiisa, waxa ayna saraakiisha booliiska sheegeen in baaritaano lagu sameenayo dilkan dad badan oo reer Iran ah ka careesiiyay
Wabaahinta dalka Iran ayaa dhacdadan warbixino kala duwan ka qoray, waxa ayna Warbaahinta bogga horey ku qorayeen in sarciga oo ku guul dareestay in uu bad baadiyo Romina Ashraf iyo haweenka kale ee reer Iran.
Baraha bulshada oo dhacdadan lagu baahiyay ayaa sidoo kale dadku aad uga falceliyeen, waxa ayna inta badan dadka cambaareyn dusha uga tuureen aabaha dilka arxan darada ah u geestay gabdhiisa iyo booliiska sababta u noqday in la dilo gabadhaasi yar.
Dalka Iran iyo dalal kale ayaa waxaa ka dhaca wax loogu yeero dil sharafeed, dilkan ayaana yimaada marka qof ka mid ah qoyska uu ku kaco fal sharafta qoyska wax u dhimaya inta ay qoyska intiisa kale ceeb soo gaari lahayd qofki falkaasi geystay oo la dilo.
Previous articleHaweeney kufsi badan geesatay oo laga musaafurinayo dalkeeda hooyo
Next articleMadaxweyne Trump oo si adag uga hadlay dilka argagaxa lahaa ee ka dhacay Minneaplolis